"R/W Kheyre & wasiiradiisa sidaan waxaa u dhaanta inay xilalka iska casilaan" - Caasimada Online
Home Warar “R/W Kheyre & wasiiradiisa sidaan waxaa u dhaanta inay xilalka iska casilaan”
“R/W Kheyre & wasiiradiisa sidaan waxaa u dhaanta inay xilalka iska casilaan”
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa ka hadlay culeesyo badan oo ka jira baarlamaanka iyo baaqashada kulamada baarlamaanka.
Xildhibaanka ayaa kamid ahaa xubnaha sida weyn ula dhacsanaa hanaanka madaxda dalka ku hogaaminayaan, balse waxaa muuqata in hadda uu ka hor yimid qaabka aan la jecleysan ee madaxda xukuumadda ku maamulayaan dalka.
Xildhibaan Idiris Cabdi ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka ee ka maqan shirarka golaha islamarkaana ku sugan magaalada Muqdisho, inay yihiin kuwo qaadanaya mushaar aysan shaqeysan.
Howlaha baarlamaanka ayuu sheegay inay fadhiid noqdeen, isaga oo tusaale usoo qaatay guddi uu kamid yahay oo tan iyo markii la aasasay wax shir ah iskuugu imaan, sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale wuxuu ka dalbaday madaxda xukuumadda inay iska casilaan xilka ay hayaan haddii aysan shacabka Soomaaliyeed u qaban karin adeegyada ay u baahan yihiin.
Wuxuu sheegay in dalalka Caalamka masuuliyiinta qaar ay xilalkooda iska casilaan marka ay kasoo daahaan kulamada baarlamaanka ugu yeero, balse Soomaaliya maalin walbaa kumanaan shacabka ah la dilo islamarkaana uusan jirin masuul xitaa lagula xisaabtamay.
Ra’iisul wasaaraha iyo wasiirada ayuu sheegay inay sida ay hadda ku jiraan ay u dhaanto inay xilalka iska caasilaan haddii aysan shacabka waxba u qaban karin.
Hoos ka dhageyso codka xildhibaan Idiris Cabdi.